Romelu Lukaku ayaa jabiyay rikoorkii 71-sano
Weeraryahanka reer Belguim Romelu Lukaku ayaa haya rikoor 71 sano ah oo uu ku hogaamiyay kooxdiisa guul ay ka gaareen AC Milan.
Romelu Lukaku ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kulankii Inter Milan ay 3-0 uga adkaatay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Milan, daqiiqado yar markii ay ciyaartu socotana wuxuu ka shaqeeyay kubad qurux badan oo ka timid madaxa Lautaro Martinez, kaasoo yimid xilli dambe oo ciyaarta ah. Wuxuu kusii dhawaanayaa daafaca AC Milan
Horyaalka Talyaaniga oo ay ku guuleysatay Juventus sagaalkii sano ee la soo dhaafay oo xiriir ah ayaa 11 dhibcood ka hooseeya kooxda hoggaanka heysa ee Inter xilli ciyaareedkan, laakiin Old Lady waxaa u harsan labo kulan oo ay dheeli karto, taasoo ka dhigeysa inay shan dhibcood oo nadiif ah ka sarreyso. Inter.
Intii ay socotay ciyaartii caawa, Romelu Lukaku ayaa laga qabtay kaamirooyinka, su’aasha ugu horreysayna waxay ahayd dagaalkii dhexmaray isaga iyo Ibrahimovic bishii hore ee quarterfinal-ka Coppa Italia, kaasoo eegay falcelinta labada laacib.
“Dadku waxay iigu yeeraan nin adag oo ma baqayo
Qodobka labaad wuxuu ahaa ciyaaryahanka dhigay rikoorkaan kulankaan hadii kooxdiisu guuleysato.
Romelu Lukaku ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee Inter Milan ee afar kulan oo xiriir ah gool ka dhaliya AC Milan muddo 71 sano ah, wuxuuna hadda galay taariikh aan caadi ahayn.
Ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee Nerazzurri ee gool ka dhaliya Milan afar kulan oo xiriir ah waxa uu ahaa Benito Lorenzi, kaasoo dhaliyay afar kulan oo xiriir ah 1950.
Ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee AC Milan ee afar kulan oo xiriir ah gool ka dhaliya kooxda Inter xilli ciyaareedkii 1972-73 wuxuu ahaa Romeo Bonetti.
axadle 8425 posts
Midowga Musharixiinta oo markale ku baaqay dibadbax dhacaya